Mba hanao ny famandrihan-toerana antsoy azafady
rehetraNK1-Non Smoking MpanjakaNQ1-Non Smoking QueenNQQ-Non Smoking Double Queen
Zavatra tokony hatao?
Na inona na inona ataonareo, dia ataovy IT
Tsara. HANAOVANA AZY SO tsara fa
Rehefa hahita anao HANAOVANA AZY
Ka hahita anareo hanao izany intsony.
Mameno ny fiainana niainany,
TSY ZAVATRA. EFA tantara Mitenena
TSY HO TSARA zavatra.
NY DIA NY arivo
Miles dia manomboka amin'ny MITAIZA IRERY
FIAINANA Na A sahisahy
Adventure na tsy
NY Tsara kokoa ny mahita zavatra
, Indray mandeha toy izay mandre IT
Fihomehezana NO tsy mety lany andro, ditry tsy misy TAONA
Sy ny nofy dia mandrakizay.
Ary mino aho fa ho Ahy ... INONA
A tena mahafinaritra
Ianao ihany ianareo ONE milomano AWAY
& NbspFROM A falifaly
Dixie Orange County dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba hijanona ao anatin'ny 15 maily nipoaka ny Disneyland sy ny hafa manintona malaza ho an'ny antsasaky ny vidiny. Andeha manana 5-kintana traikefa teo amin'ny 3-kintana teti-bola. Tsy hanenina ianao izany.
Efi-trano sy ny Suites
Na dia antoko ny 2 amin'ny tantaram-pitiavana getaway, na ny fianakaviana ny 5 amin'ny farany Disney fialan-tsasatra, dia manana ny toerana ho anao. Mifidiana misy ny vao nohavaozina Suites fa manompo tsara indrindra ianao sy ny mpitety faniriana.
Na Izany dia midika hoe manolo-kevitra hoe aiza no handeha ho sakafo hariva, nandamina ny fitaterana, na fiarahabana anao fotsiny miaraka amin'ny tsiky, ny 24 ora anoloan'ny mpiasa birao dia vonona ny hanao ny mijanona ho mora sy mahafinaritra araka izay azo atao.
amin'ny farany isika ihany no manenina
ny vintana dia tsy mandray
Ny tantara fohy momba ny
Ny Dixie marika dia fanomezam-boninahitra roa anabavy ho any amin'ny fahatelo, Dixie, ny fiainana izay voaendaka fohy be loatra amin'ny alalan'ny mpamily mamo. Mitady ny hiverina ny ratsy ho tsara, ny anabavy roa velona namorona ny trano fandraisam-bahiny amin'ny anarany izay maneho ny fototry ny izay Dixie dia ... manetry tena, classy, ​​zavakanto, tontolo iainana fantany, fangorahana, tony sy ny sisa maro hafa.
Mahita ny trano fandraisam-bahiny ny
dobo filomanosana fidirana
FREE fijanonana toerana
Mpanatanteraka King - Rates avy $ 59.00 / alina
Double Queen - Rates avy $ 69.00 / alina
Find Dixie Orange County ny ambony
Screen HDTV fisaka w / Cable
Room Service (voafetra)
Safe petra-bola Box (anoloan'ny latabatra)
Vata fampangatsiahana & Microwave
Dixie Orange County ny ambony
Zava-nisongadina & Offers
Ve ianao tia perks fotsiny betsaka araka izay tia ny dia lavitra? Tsara dia, indro, intsony! Ankafizo discounted tahan'ny ny niakatra ho any 15% - fampiasana fampiroboroboana fehezan-dalàna MEMBER15 rehefa famandrihana ny trano eny ny vao nohavaozina efitrano sy ny Suites ato amin'ny Dixie Orange County tamin'ny voafantina ireo tolotra:
-AAA Mpikambana fihenam-bidy
Ny manan-kery sy ny maha-mpikambana karatra ID ilaina amin'ny maso-in mba handray ny fihenam-bidy. Limited fisian'ny.
Dixie Orange County te mba ho azo antoka anao sy ny fianakavianao koa hahazo ny taha lehibe izay hitanao aterineto rehefa boky mivantana amin'ny alalan'ny antsika sy hamonjy 10%. Famandrihana mivantana dia mety sy mora ary manana tsy misy hafa saram miafina ilaina amin'ny alalan'ny antoko fahatelo toerana. Tsindrio fotsiny eo ny bokotra etsy ambany ary SAVE 10%!
Famandrihan-toerana rehetra dia ahitana:
Manan-kery ny famandrihan-toerana amin'ny aterineto ihany. Ampiasao fisondrotana DIRECT10 fehezan-dalàna, rehefa manao ny famandrihana.
Ho amin'ity taona ity ny fanampiny tantaram-pitiavana iray amin'ny olona iray manokana sy ny Bokin'i ny Tantaram-pitiavana Getaway Package. Available ny volana Martsa manontolo. Ankafizo Champagne, sôkôla, ary ny sakafo maraina teo am-pandriana tamin'ny iray amin'ireo Cozy vao nohavaozina Suites mpanjaka tao amin'ny Dixie Orange County. Ny tahan'ny manomboka amin'ny $ 99 / alina ary ahitana:
-Cozy King Suite tanteraka miendrika ho 2
FITEHIRIZAM-BOKIN'NY Vavolombelon'i tavoahangy Champagne
-Breakfast Teo am-pandriana nandritra ny roa
(1 maraina ny safidy)
-1pm Late-maso avy
Inona ny olona nanao hoe: Iza moa izahay?
"I teo amin'ny teti-bola mafy ny mozika manatrika fivoriamben'ny vondrom-paritra, ary ilaina ny hijanona any ho any izay tsy mandeha ny handrava. Be aho, tena faly rehefa nandeha an-toerana ho an'ny ny vidiny. Nihevitra aho dia handeha ho lany andro, fa izany no Nohavaozina, maoderina ary madio. Gaga aho !! "
"Friendly mpanjifa ny anoloana mpiasa birao, lahy sy vavy. Ary nanao ahy toy ny hoe tao an-trano aho. "
"Ity toerana dia awesome !! Vao nohavaozina, fandriana lehibe, bodofotsy, ondana ... vaovao rehetra! Ny efitra dia voaravaka tsara anefa, ary tena lehibe. Bathroom squeaky madio, tena tony trano fidiovana. Maro ny fijanonana. Very mangina faritra. Ny ambainy mainty hoditra avy ireo karazana. "
Very madio sy milamina. Close ny rehetra ny zavatra manintona, Disneyland sy ny Beach. Fahazoan-dalana hidirana tena ve ity toerana ity ny olona rehetra mitady toerana mahafinaritra amin'ny teti-bola mafy. Karl nanao asa niavaka tamin'ny rehetra ny zavatra ilaina sy tena liana. Dia antoka hitsidika eto indray! Tsara anefa efi-trano nohavaozina amin'ny microwave sy ny vata fampangatsiahana. "
"Misaotra noho ny tena mahavariana ho Mpanohana! Ny vahiny no tena miavaka. Nanana ny zavatra rehetra izahay nilainay akaiky akaiky, toerana mba mihinana, ny Berry Knott Farm sy Disneyland. Ny ankizy Nanana fipoahana milalao miaraka amin'ny dobo kilalao. Ho indray !! "
MANARAHA US tao amin'ny Facebook tolotra manokana
Ny Rahavavy Property
AZONAO ATAO NY DIMY STAR hiaina am-TELO SERVICE STAR anabavy trano rehetra any Hollywood, Kalifornia. FANAMPIM-PANAZAVANA boky etsy ambany sy ny efitranonao ANIO!
Contact Miaraka Aminay
Hadino ny tenimiafina? (Akaiky)
Te Login? (Akaiky)
Username na Email